Nhau - Aluminium Bhokisi Rekushandisa
Aluminium alloy toolbox ndechimwe chezvigadzirwa zvealuminium bhokisi zvigadzirwa. Iyo mhando yebhokisi iyo inoumbwa nealuminium alloy zvinhu kuti uwane kushanda kwekuisa maturusi uye ekuyera maturusi. Yakasiyana nemamwe mabhokisi ematurusi, iri bhokisi rematurusi rine aruminiyamu chiwanikwa. Hunhu hwechinhu uremu hwakareruka, nyore kugadzirisa, uye hune mikana isingaenzanisike pamusoro pezvimwe zvinhu maererano nesimba.
Aluminium kesi, aruminiyamu chiwanikwa maturusi mabhokisi, aruminiyamu chiwanikwa kuputira mabhokisi, ekurapa mabhokisi, ekuratidzira mabhokisi uye mamwe aruminiyamu chigadzirwa kuputira mabhokisi, Yuhang Chassis Fekitori zvigadzirwa anosanganisira: cosmetic kesi, zvishongo makesi, CD makesi, chip makesi, Gwaro password bhokisi, runako saloni bhokisi , rekurapa bhokisi, rakarongedzwa chiridzwa bhokisi, laptop bhokisi, wachi bhokisi, chishandiso bhokisi, ndege ndege, mifananidzo mifananidzo bhokisi, performance prop bhokisi, mimhanzi bhokisi, bhiridha kirabhu bhokisi, gorofu sutu bhokisi, kubhengi mari bhokisi, Cash bhokisi, bhayiki bhokisi , bhokisi rewaini, hove gear bhokisi, chipo bhokisi, acrylic bhokisi, akasiyana-siyana anovhundutsa liners, nezvimwe.
Muviri mukuru wechigadzirwa unogadzirwa nemhando yepamusoro yealuminium alloy profiles, ayo ane hunhu hwekugona dhizaini, chimiro chakasimba uye chitarisiko chakanaka. Inoshandiswa zvakanyanya muzviridzwa, metres, zvemagetsi, kutaurirana, otomatiki, sensors, smart makadhi, maindasitiri kutonga, chaiyo michini uye mamwe maindasitiri. Iyo yekumusoro-kumagumo chiridzwa Iyo yakanaka kabhineti.
Aluminium bhokisi [aruminiyamu chiwanikwa turusi bhokisi] Welding
(1) Sarudzai nomoto waya
Kazhinji sarudza 301 yakachena aruminiyamu yekutengesa waya uye 311 aluminium silicon yekutengesa waya.
(2) Sarudza Welding nzira uye ma parameter
Inowanzoitwa nenzira yekuruboshwe yekuwelda, uye torch torch uye workpiece inoumba kona ye60 °. Kana iwo iwo mukobvu wewelding uchipfuura 15mm, nzira chaiyo yekuwelda inoshandiswa, uye tochi yekumonera uye yekushandira inoita 90 ° kona.
(3) Kugadzirira pamberi Welding
Shandisa makemikari kana michina nzira yekunyatso kuchenesa pamusoro oxide firimu pamativi ese eiyo weld groove.
Mechiniki yekuchenesa inogona kushandisa mhepo kana yemagetsi milling cutter, scrapers, mafaera uye zvimwe zvishandiso. Kune yakatetepa oxide mafirimu, 0.25mm emhangura waya mabrashi anogona zvakare kushandiswa kubvisa oxide mafirimu.
Welding inoitwa nekukurumidza mushure mekuchenesa. Kana iyo nguva yekuchengetera ikapfuura maawa mana, inofanira kucheneswa zvakare.
(4) Zvimiro zvealuminium uye aluminium alloy zvinhu mumabhokisi ealuminium
Aluminium isirivha-chena mwenje simbi ine ipurasitiki yakanaka, yakakwira magetsi uye yekupisa conductivity, uye zvakare ine kugona kurwisa oxidation uye ngura. Aluminium iri nyore oxidized kugadzira aluminium oxide firimu, iri nyore kuburitsa inclusions mune iyo weld, nokudaro ichiparadza kuenderera uye kufanana kwesimbi, ichideredza michina yayo zvimiro uye ngura kuramba.
(5) Dambudziko mukuwisira aluminium uye aluminium alloy zvinhu mumabhokisi ealuminium
Zviri nyore kwazvo kuti oxidize. Mumhepo, aruminiyamu inosanganisirwa nyore nyore pamwe neakisijeni kuti iumbe dense yealuminium oxide firimu (ukobvu ingangoita 0.1-0.2 μm), ine nzvimbo yakanyunguduka (inenge 2050 ° C), ichipfuura zvakanyanya nzvimbo yakanyunguduka yealuminium nealuminium alloys ( anenge 600 ℃). Kuwanda kwealuminium oxide ndeye 3.95-4.10g / cm3, ino ingangoita ka1.4 nguva yealuminium. Iyo yepamusoro yealuminium oxide firimu iri nyore kutora mwando. Kana ichipisa, inotadzisa kusangana kwesimbi yakakosha, uye zviri nyore kuumba pores, slag, uye Kukanganisa kwakadai sekushaikwa kwekubatana, zvichikonzera kudzikisirwa kwesimbi yekuita.
Aluminium alloy inogadzirwa neakachena aluminium nekuwedzera zvimwe zvinowedzeredza zvinhu, senge aluminium-mhangura chiwanikwa, aluminium-zinc-magnesium-mhangura super yakaoma aluminium alloy. Aluminium alloy ine hunhu hwehuremu hushoma, mutengo wakaderera, michina zvivakwa (yunifomu simba), uye aluminium alloy iri nyore kugadzirisa uye ine yakakwira degree yekupisa kupisa. Kunyanya iyo injini chikamu chemotokari inonyanya kukodzera kushandiswa kwealuminium alloy zvinhu. Kana ari mazhinji emakesi emakesi, aluminium-mhangura alloys anoshandiswa. Kunyanya funga kupisa kupisa. Nekuti mhangura nealuminium zvakasanganiswa uye zvakabuditswa kunze, iko kupisa kwekuparadza mashandiro kwakanaka chaizvo, uye kunyangwe mamwe ekupedzisira-ekupedzisira CPU emvura kutonhora mafeni anoshandisa chinhu ichi. Rudzi rwebhokisi muviri uchishandisa aruminiyamu chiwanikwa chakabudiswa zvinhu uye zvine chekuita nenhumbi. Yakasiyana nemamwe mabhokisi emaficha, iri bhokisi realuminium rine zvimiro zvealuminium alloy zvinhu, kurema uremu, nyore kugadzirisa, yakasimba kutakura-inokwana kugona, chitarisiko chakanaka, uye zvine musoro dhizaini dhizaini. Nekuda kweakasarudzika mamaki ealuminiamu bhokisi uye yepamusoro uye yepamusoro yezvigadzirwa zvemukati, inoita basa riri nani mukudzivirira chigadzirwa maererano nekufambisa kuri nyore uye mashandisiro, uye iri bhokisi rakakodzera rezvakasiyana-siyana zvigadzirwa zvepamusoro.